Troleandomycin - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Troleandomycin
Generic Name: Troleandomycin Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Troleandomycin ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Troleandomycinသည် Macrolide ပဋိဇီဝဆေးအုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ ဘက်တီးရီးယားများကို တိုက်ခိုက်ပေးပါသည်။
Troleandomycin ကို အမျိုးမျိုးသော ဘက်တီးရီးယားရောဂါများဖြစ်သည့် အာသီးရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ လေအိတ်ခေါင်းရောင်ခြင်းနှင့် နမိုးနီးယားတို့တွင် အသုံးပြုပါသည်။
Troleandomycin ကို ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်မပါသော အသုံးများအတွက်လည်းသုံးကောင်းသုံးနိုင်ပါသည်။
Troleandomycin ကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း အတိအကျသောက်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များကို နားမလည်ပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ သူနာပြု၊ ဆရာဝန် စသူတို့အား ရှင်းပြခိုင်းပါ။
ဆေးသောက်တိုင်း ရေတစ်ဖန်ခွက်အပြည့်နှင့် သောက်ပါ။
နေကောင်းလာသည့်တိုင်ဆေးကို ညွှန်ထားသည့် ရက်အပြည့်သောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပိုးများအကုန်မသေခင် လက္ခဏာများက စသက်သာလာတတ်၏။
Troleandomycin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Troleandomycin ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Troleandomycin ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Troleandomycin အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Troleandomycin အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Troleandomycin တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
Troleandomycin ကြောင့် သန္ဓေသားတွင် အန္တရာယ်ရှိမရှိမသိရပါ။ သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးသောက်စဉ်ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Troleandomycin သည် နို့ရည်ထဲသို့ ဖြတ်နိုင်မဖြတ်နိုင် မသိရပါ။ ကလေးကိုနို့တိုက်နေပါက ဆရာဝန်ကိုမပြောဘဲ ဆေးမသောက်သင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Troleandomycin ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Troleandomycin ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများသည့် ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြပါ။
ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ – အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရ စကားပြောရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွလာခြင်း။
အသည်းပြဿနာများ (အရေပြားနှင့်မျက်လုံး ဝါလာခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးထွက်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ အလွန်နွမ်းနယ်နေခြင်း
တခြားသော မပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ပိုဖြစ်လွယ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့ဖြစ်လာပါက ဆေးကိုမရပ်လိုက်ဘဲ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း
ခေါင်းမူးခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Troleandomycin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Troleandomycin သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အတက်ရောဂါဆေးများ ဥပမာ- carbamazepine (Tegretol), phenytoin (Dilantin), or valproic acid (Depakote, Depakene)
ပန်းနာရင်ကြပ်ဆေးများ – theophylline (Theo-Dur, Theolair, Theochron, others)
သွေးကျဲဆေးများ – warfarin (Coumadin)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Troleandomycin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Troleandomycin က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Troleandomycin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Troleandomycin သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Troleandomycin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
250 to 500 mg ကို တစ်ရက်လျှင် ၄ ကြိမ်။
Streptococcal Infection အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
ကလေးတွေအတွက် Troleandomycin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် စိတ်ချရမှုနှင့် အာနိသင်ရှင်မှုအား ထုတ်ပြန်မထားသေးပါ။
အသက် ၁ နှစ်နှင့်အထက် – ၆ နာရီခြားတိုင်း 125 to 250 mg သောက်ရန်။
Streptococcal ပိုးများတွင်သုံးသည့်အခါ ဆေးကုသရက်ကို ၁၀ ရက်အထိ ဆက်ပေးရမည်။
Troleandomycin ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Troleandomycin ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Troleandomycin. https://www.drugs.com/mtm/troleandomycin.html. Accessed November 22, 2017
Troleandomycin. https://www.rxlist.com/tao-drug.html. Accessed November 22, 2017